SEENAA GABAABDUUNUUHOO MAHAMMAD GOOBANAA1952 – 2022Amajjii 19, 2022 -
Ji’a Hagayyaa tan bara 1952-a, gaafa Mahammad Goobanaa ilmii barsiisuuf Dirree Dhawaa-rraa gama ganda Warra Alii kan magaalaa xiqqoo Laga Mixee bira jirutti godaanu, Haati Warraa, Faaxumaa Aadam, ulfa ji’a shanii garaa qabdi ture. Jiruu magaalaa guddoo keessaa baatee tan ganda baadiyaa xiqqoo tiin odoo wal hin fudhatin, Onkololeessa 05, bara 1952, Faaxuma, angafaaf, ilma dhiiraa, kan kitaabni banamee – burujni laalamee, maqaan Nuuh moggaafamuuf deeyse. Nuuh jecha afaan Hibruu irraa madde, kan hiikkaan isaa salaloo jechuu ti. Salaloon dadhabbii, yaada, hiraar, naasuu fii kkf-rraa sammuu hara baafachiisa. Kan maqaa kana beeysise Nabi Nuuhi.
Nabi Nuuh, akka amantii Islaamaa fii Kiristaanaatti, nama Ergamaa Rabbii tahuun saba isaa badii-rraa gama qulqullinaatti yaame ja’ama.Akka umriin Nuuh afur geeyseen, bara 1956 keeysa, abbaa fii haati Ganda Alii-rraa magaalaa Dirree Dhawaa, tan duraan keessa jiraachaa turanitti deebi’an. Akki san, Nuuh, joollee Ganda Gaaraa tan ededa Qafiiraa keessaa tokko taasise. Achumaan, odoo hin turin, magaalaa Dirree tan hiryoonni maqaa masoo waliif moggaasuun itti beekkamanitti, kan isaa tiis, Nuuhoo tahe.Jalqaba bara 1961, magaalaa Dirree Dhawaa keessatti, aruuza Ugaazni ilma isaa tiif godhe-rratti, gaaffii Abdullahii Girichoo, joollee alagaa tanneen dooyaa-rraa wallisaa turaniin “mee wallee afaan keenyaa tiis takka nu dhageeysisaa khaa!” je’e. Yaroo tana, kan miya muuziqaa dhawaa ture tokko, “meeshaan muuziqaa afaan Qottuu hin beeytuu. Yo ittiin dhawan ni cabxi,” je’een. Manguddoonni Oromoo kanneen magaalattii keeysa jiraatan, Oromoon hawaasota alagaa warra halaalaa dhufanii isaan keeysa qubatan maraan tuffatamuu kanuma baakan, arraba gurbaan dooyaarra Abdallatti gadi lallabe yaroo dhagayan haalaan nahan.
Joollee isaanii mabrazatti yaammatanii, yo akka joollee alagaa sanitti wallisuu dandayan, miya muuziqaa ammayyaa tan joollee san daranii isaaniif bituu akka murteeysan gabaasaniif. Ji’a muraasa booda, horii walitti buusaniin, miya himatan bitanii, Abuubaka Muussaa, Usmaa’il Muummadii fii Alii Shabboo harka kaayan. Isaaniis, irbuu manguddoof seenan bakkaan gayuuf, kaa’imman fedhii wallisuu fii muuziqaa dhawuu qabaniin hawwisoo maqaa Urjii Bakkalchaa moggaasaniif dhaabanii, Bitooteessa 08, bara 1962, ykn akka lakkooysa Hijraatti, Iida Ramadaanaa kan bara 1381, dooyaa gubbatti bahanii, manguddoota malees, Oromoota Magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatan seenaa daawwachiisan. Gaafana Nuuhoo Goobanaa joollee umriin amata kudhanii ti ture. Umriin xiqqaattullee, seenichi gaafasii sammuu Nuuhoo keessati siidaa wallee afaan Oromoo guddoo dhaabbatte.Sossoohinsi afaanii fii aadaa Oromoo kan Hawwisoo Urjii Bakkachaa tiin jalqabe, dafee gandoota Dirree hunda keeysa saaree, dargaggeeyyii maqaa hawwisoo Hiriyaa Jaalalaa, Biiftuu Ganamaa, Maskoob, Suuqal-ilaaqii fii Arsaletti gurmooyte bibbiqilche. Akki san mootummaa Hayle Sillaasee/Amaaraa akkaan dallanse.
Wallee afaan Oromoo keessaan sab-boonummaa Oromoo kan dagaagaa jiru saffisaan qophuuf shira xaxxeen, miya muuziqaa irraa zaraftee, dargaggoota hawwisoo hidhatti guurutti seente. Kaa’imman aadaa fii afaan isaanii guddisuun yakkaman, gariin, haala sanirra cimaa taheef muratanii, biyyarraa bahanii, bahara qaxxaamuranii, tooftaa lolaa baratanii, Qeeyroo Ganama if godhanii, karaa Soomaalee tiin cabsanii, isaanii biyya senuuf deemuu, Onkololeessa 19, bara 1970, malkaa Bulloo-Haritti mootumma Soomaalee tiin qabamanii mana hidhaa Man-Dheeratti darbaman. Yaroo tana, Nuuhoon, faana miseensota hawwisoolee hordofuun, dargaggeessa harmoonikaa fii sagaleen hiriyoota booharsu tahe.Qabsoo Qeeyroon Ganamaa hidhaa mudataniif itti fufuuf, Elemoo Qilxuu faan Arfaasa 21, bara 1973, biyya seenanii daggala Cercer keessaa hoggaa sagalee qabsoo bilisummaa bowwaasan, Nuuhoon, warra akka Muktaar Giingee, Abduslaam Ibraahim (Kibriit), Asaffaa Baqqalaa, Abdurahmaan Maammad Muussaa fii Husseen Baashaa faa waliin garee (hawwisoo) uummatee, hujii kaa’imman isa duraa itti yakkaman qaata itti fufuu jalqabe.Gaafana, tattaafata bara 1972 jalqabeen afuuffaa harmoonikaatti ogummaawee, walaloo fii yadalees ifumaaf baafatee, wallelee dhaamsa adda-addaa qaban, kanneen akka,Rabbiin si’uume, suma bareecheeHaala amalaan, suma qaceelcheeKan deemu mara sirratti maraacheeHin agarre tan akka tee titti tolcheeTattabachiiftuu lubbuu tiyyaaSi malee hin qabu jiruu tiyyaa Boontuu bar sihi ifaan tiyyaatiin hawaasni, keessaa huu kaa’imman jalaa ol guddatan, karoora mootummaan Amaaraa afaan Oromoo tii fii Oromummaa dhabamsiisuun isaan Amaareeysuuf baafatte irraa akka baraaran godhutti seene. Haaluma kanaaf, bara 1975 walleelee kaaseeta guutuu guddina sab-boonummaa tiif gumaache.Isaa haala oliitti jiru, Nuuhoon. jalqaba bara 1976 biyya Jabuutii seene. Akka achi dhaqeen, carra arakte hundatti fedhii isaa tan wallisuu itti fufutti seene. Akka hujii arkateen, mindaa duraa tiin daara if baasuu dhiisee, gitaara bitatee if barsiisutti gattaa’e. Qophiin ayyaana bilisummaa biyya Jabuutii tan Waxabajjii 27, bara 1977 gaggeeyfamete, kennaa fii dandeeytiin wallisuu fii alalasuu-rratti qabu lammii bira dabartee ijaa fii gurra alagaa hawadde.
Gaafana, miseenssoota hawwisoo Caayaa Oromoo biyya Jabuutii waliin tahuun, walalooSalaam salaam jenne xiqqaa dhaa fii guddaaNamaa sa’aa keeysan mukaa citaa dhagaaDhiiraa dhalaa hin jennee lammii teeysan maraSalaamtaa gammachuu nurraa guddifadhaaIsin wajjiin jirraa nu quba-qabaadhaaGuyyaa bilisummaa baga gayeesan jennaa Nuunilleen haa-gayu Gooytaan hiree akkanaajettu, yadalee ajaa’ibaa tiin dhawwaaquun, taraa duraa tiif maqaa Oromoo dooyaa biyya alagaa-rratti beeysisuun, mootummaa Dargii garaa guban. Qophii tana booda, dhuma bara 1977, Nuuhoon, waaheloota lamaa waliin, biyya Yaman tan sossoohinsi qabsoo bilisummaa keessaa odeeyfamutti dhaquuf doonii yaabbate. Akka Yaman seenaniin, haalli Jabuutii-rraa gamas isaan geeyse tahuu, hanqatee, mana hidhaa naqaman. Hidhaa ji’ootaa booda, jalqaba bara 1978 sadeenuu Jabuutitti darbaman.
Nuuhoon achirraa walakkaa bara 1979, karaa biyya Sa’uudii barare. Biyya namni hojjachuuf akka galaanaatti itti yaa’u, tan sagaleen muuziqaa itti haramii keessatti, Nuuhoon, tan hujii dhiisee, wallee,Bareedduu Oromoo mayra bishaan lagaaNa duraa sinyaatin bineensi alagaaqalbii baqattoota dubraa fii dardara Oromoo walitti kaleeysituuun, akkasumatti ammallee, Yaa galaana jiruu fuuteen naan deemtaa Fedhii too hin laaltuu tan tee tiin ceetaaGoojjoon jaarradhe humnaan narraa diiydatiin, jiruu gabrummaa tan yaroo sanitti kumoota ilmaan Oromoo baqa muddee biyya ambaa keessatti hiraarsaa jirtu abaarsaan darbate.Gama biraa tiin, jiruu biyya ambaa tan hegereen isii dukkanaa yaaduu fii mararfachuu qofa odoo hin taane, wallee Dubbadhaa haasawaa martinuu dubbadhaaBilisummaa teenyaaf mala wal gaafadhaaYaa magaala Shaggar handhura abbaaMaqaan kee si badee tahullee AbabaaGadaa hin wallaatuu waa’ee Raabaa DooriiCallisuu lakkisii dubbadhu waan duriiYaa Magaalaa Gujii angafa dhalootaa Odaan kee gubatee caayaan OromootaaAbuura dhoorkamee galmi si duwwatee Garaan si dandayee akkamitti callifteGobeelle, Mul’ata, Maaruu fii AnniyyaGaaraa fii daggalli bosonni Oromiyaa Warri keeysa tartan jiruu bara dheeraaMala nuu himaa qabsoo bilisummaa-rraaAkka gaafa Gadaa gaafa Murti Guutoo Gaafa marii buttaa gaafa duula qeeyroo Oromoo mee ka’aa nuuf wal marihadhaBilisummaa teenyaaf mala walgaafadhaajettu, tan alalaasni qalbii namaa hawaduun, , magaalonni, gaarran, dachii fii samiin Oromiyaa marti seenaa isaanii tan dabarte, tan gaafa Gadaa, gaafa bilisaa, yaadatanii qabsoo bilisummaa tiif wal marihatan yaadachiise.
Walii-galatti,walleelee seena qabeeysa tahuuf jiraatan, kanneen dheerinni yaroo hin moofoysine if keeysaa maddisiisuun, kaasetatti waraabee, horuma isaa tiin biyya fii adunyaa keeysa facaasuun, dukkana qabsoo ganamaa tiif guca qabsiise.Galaanni jiruu kan Nuuhoon qeequ, ji’a Caamsaa kan bara 1986-a Sa’uudiirraa baasee magaalaa Roomaa tan biyya Xaaliyaan geeyse. Ji’a kudha afur achi teeysisee, haadha warraa, tan gaafasii, Kaltum Abdurahmaan Yuusuf fii ilmaan waliin Fuul-bana 29, bara 1987 magaalaa Winippeg tan biyya Kanadaa-ttiin barare. Achirraa, baruma san, inni dura, maatiin boodaan magaala Torontootti godaanan. Yaroo Nuuhoon Kanadaa fii Torontoo itti dhufe, yaroo jaarmayni ilmaan Oromoo kan bara 1974 namoota jibiriin biyya Ameerikaa magaalaa Waashingitaniti bu’ureeffame, dagaagee, Torontottiis goblaa bal’ifate. Dhufiinsi Nuuhoo, dhaaba dagaagaa jiruuf irree addaa dabale. Galgala aadaa kan dhaabichaa booharsa himinaa olii tiin faayee, mooraa diinaa keeysaa Oromoota as yaase. Haala akkanaa, ji’a Waxabajjii biyya Ameerikatti godaane. Gaafa mootummaan Dargii burkutaawe, wallisoota biroo waliin Finfinnee dhaquun, Adda bilisummaa Oromoo kan mootummaa Ceehumsaa irraa qooda fudhateef tin’isa cimsuuf, Amajjii 19, 1992, haala hamaa keeysa, Finfinnee dhaqe. Finfinnee malees, magaalota garii keessa daddeemuun, wayaa alaabaa tiin if faayee, walleelee biroo biratti, Arra guyyaan kan Oromoo tiiGuyyaa bilisummaaf wal-marii tiijechuun, dhaamsa hawaasaaf dabarsuun, bakka dhaqu maratti lolaa ummataa keessa if cuuphe. Odoo akkasitti jiruu, haalli mootummaa Ceehumsaa Wayyaaneen dhunfatamee, odoo hin jaalanne, biyya gadhisuu dirqame.San boodallee, dhibdee fii bacancara mooraa qabsoo keessaa nama wal-nyaachiftuun odoo abdii hin muranne, bara 2000 keessa, ilmaan Oromoo warra bilisummaa sabaa tiif muratanii biyya Eertiraa keessatti leenjii tooftaa waraanaa fudhaachaa jiran bira dhaqee, isaan jajjabeeysuu, booharsuu fii hamileessuu malees, wallee,Lallabannee nu qabsaawonni iyyanneeNuu dirmadhaa odoo yaroon hin dabarrejattuu waliin waraabe, dhaamsa isaanii lammii Oromoo keessa bowwaase.
Nuuhoon qaamaan biyyaa haa bahu malee, sammuun achii hin fagaanne. Biyyoota ambaa kanneen keessa dhaqe maratti fedhiin qubsumaa keessatti dagaaguu waan diddeef, dhuma bara 2006 Keeniyaatti godaanuun Oromiyaatti if kaleeyse. Ji’a Bitooteessaa, tan bara 2010-ii, odoo bakka deemu maratti, sagalee lallabamtuun,Tokkummaa, tokkummaa! Yaa ilmaan Oromoo Tokkummaa!Shan, kudha shan, shantam taatanii,Gargar facaatanii,Bineensa beelaweef hiraata taatanii!Isin yaamti harmeen, isin yaamti harmeenYaa ilmaan koo na dhaqqabaa jatti harmeenje’ee, tokkummaa lammii fii qabsaawotaa tiif waywaachaa, saba qabsotti yaamuu, “baasaan Musxafaa” je’ee Finfinneen if dhawe. Biyya Kanadaa tan sadoo fii salaloo jireenyaa biratti, tajaajila fayyaa tiin biyyoota adunyaa keessaa durummaa qabdu dhiisee, biyya mootummaan isii kiniina-rra xiyyitii nama obaasuu ykn na hin deeggartu jettee hidhatti nama guuruu filattutti godaanuun, Nuuhoo, odoo hin turin, illaa dhukkuba ergarama umrii waaheleeffatu jala naqe.
Qulus-qulusii bara 2013 isa jalqabdeen odoo araraafamu, kabsata dhabee, bilisummaa akkaan jaalatuu fii qabsaawaa fii ture odoo hin arkin, Amajjii 18, bara 2022, umrii torbaatamaan, bikka tana booda irraa godaanuu hin dandeenyetti sokke. Akka kanaan, Nuuhoon Malikaa Alii, Haadha Warraa, tan baroota kudha saddeettan dabran waliin jiraate biratti, lmaan isaa Zahraa, Obsaa, Saamii, Bilisummaa, Tokkummaa, Firoomsaa fii Bilqiisaa malees, warra akaakoo tahuuf sadii hadiyyeeyse. Isaaniin alattiis, lammii Oromoo hunda-rraa imimmaan maddisiise.Nuuhoon, wallisaa, alalaasaa, yadaleessaa fii booharsaa fakkii fii idda bu’aan isaa qaalii ti. Irbuu fii imaama bara 1972 saba isaa tiif seene-rraa odoo hin daddabin, haala gaddaa fii gammachuu, dhibdee hawwasaa fii qabsoon qabdu-rratti walleelee heddu wallise. Haala kanaan, gumaata guddinaa fii dagaagina afaan, aadaa, sabboonummaa fii qabsoo Oromoo tiif godheen seenaan isaa, walleelee isaa waliin, dhalootarraa dhalootatti dabruun ilaa abad yaadatamuuf jiraata.
Previous Xinxalaa – Maali Mallisaa?
Next Sirni Geggeessaa fi Awwaalcha Artist Nuhoo Goobanaa